भारतको बिहारमा चट्याङ र हावाहुरीका कारण ३३ जनाको मृत्यु
भारतको बिहारमा चट्याङ र हावाहुरीका कारण ३३ जनाको मृत्यु भएको छ । हिजो दिउँसो तीव्र गतिमा चलेको हावा हुरी र चट्याङमा परेर बिहारका १६ वटा जिल्लामा ३३ जनाको मृत्यु भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
ग्लोबल संवाददाता शनिबार, जेठ ७, २०७९, १७:४५:००
भारतमा सन् २०१९ मा प्रदुषणका कारण २३ लाख मानिसको मृत्यु भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । भारतको प्रदुषण र स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोग ल्यान्सेटले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा १६ लाख व्यक्तिको वायु प्रदुषणका कारण मृत्यु भएको र ५० हजार भने जल प्रदुषणको शिकार भएको उल्लेख छ ।
ग्लोबल संवाददाता बुधबार, जेठ ४, २०७९, १९:५०:००
२०७९ स्थानीय तह निर्वाचन धनुषाको १० पालिकामा कांग्रेस, तीनमा जसपा,दुईमा एमाले र एकमा माओवादी केन्द्र निर्वाचित - रासस धनुषा । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत धनुषाका १८ पालिका मध्ये १६ पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ भने दुईवटाको मतगणना जारी छ । ती मध्ये १० मा नेपाली कांग्रेस, तीनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), दुईमा नेकपा (एमाले) र एकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवारले विजयी हासिल गर्न सफल भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको शिष्टाचार भेट - ग्लोबल संवाददाता काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकार उपविदेशमन्त्री उज्रा जिया नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटवार्तामा उहाँहरुबीच नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
२०७९ स्थानीय तह निर्वाचन भरतपुरमा रेनु दाहालको निरन्तर अग्रता, ७८५४ मतान्तर - ग्लोबल संवाददाता चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले निरन्तर अग्रता बनाउनुभएको छ । हालसम्म ९२ हजार १२८ मतगणना हुँदा रेनुले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका विजय सुवेदीसँग ७८५४को मतान्तर बनाउनुभएको छ ।
डोल्पाका यार्सा पाटन जेठ ११ गतेदेखि खुल्दै ५ घण्टा पहिले
जबर्जस्ती करणी आरोपमा पक्राउ १५ घण्टा पहिले
भरतपुरमा गठबन्धनका उम्मेदवारको अग्रता कायमै १६ घण्टा पहिले
गाेरखा भूकम्पकाे सात वर्ष : आज स्मृति दिवस मनाइँदै विसं २०७२ वैशाख १२ गते मध्याह्न ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो ।
मकवानपुरमा जिप दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु
मकवानपुरको सिमखोलामा जिप दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर २, कुलेखानी सिमखोलामा जीप दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
कैलालीमा लागूऔषधसहित ४ जना पक्राउ
कैलालीमा सशस्त्र प्रहरीले लागूऔषधसहित ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । शनिबार टीकापुर नगरपालिका–८ खक्रौला नाकाबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३४ गण हेडक्वाटर कैलालीले जनाएको छ ।
झापा । प्रहरीले बालिका करणी गरेको अभियोगमा झापामा एक म्यादी प्रहरीलाई पक्रिएको छ । पक्राउ पर्नेमा उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका–५ का ३० वर्षीय कमलप्रसाद पोख्रेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । प्रहरीले उनलाई शुक्रबार झापाको गौरीगञ्जस्थित वडा नं २ बाट ड्युटीमा रहेकै अवस्थामा पक्रिएको हो ।
काठमाडौँ । आठ वर्षअघि भएको एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतिस्पर्धीले आफूमाथि आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेसँगै काठमाडौंको माइतीघरमा बलात्कारविरुद्धको प्रदर्शन भएको छ ।
डोटी । डोटीमा आज बिहान बस दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा परी घाइते भएका १२मध्ये पाँच जनाको अवस्था जटिल रहेकाले उपचारका लागि जिल्ला बाहिर पठाउने तयारी भएको दिपायल इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रुपसिंह थापाले जानकारी दिनुभयो ।उक्त दुर्घटनमा एक बालक बेपत्ता भएका छन् ।
म्याग्दी । हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा म्याग्दीमा सात प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको छ । जिल्लाका ६ स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, दलित महिला, महिला र खुला सदस्य पदमा खसेको मतको ७.५७ प्रतिशत मत बदर भएको हो ।
जीपले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुई जनाको मृत्यु
महेन्द्रनगर । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत कञ्चनपुरको दैजी–झलारी खण्डको अर्जुनी क्षेत्रमा शुक्रबार राति जीपले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुईको मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौंमा वालेन १७ हजारले भाेटले अगाडि, स्थापित तेस्राेमा
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना भइरहँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र साहले १७ हजार भन्दा बढी मतान्तर बनाउनुभएकाे छ । यसअघि दोस्रो स्थान लिइरहनुभएका एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले उछिन्नुभएकाे छ।
केही दिनदेखि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा महिला हिंसा भएको भनी प्रकाशित भिडियोबारे अध्ययन गर्न बनेको छानविन समितिलाई सहयोग गर्न गृहमन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी यस्ता विषयमा सीघ्र छानविनमार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा बागलुङ नगरपालिकामा उम्मेदवार बनेका पाँच राजनीतिक दलका उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ । कूल सदर मत खसेको १० प्रतिशत मत नल्याएका दलका उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार नगरप्रमुख र उपप्रमुखका आठ उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन: ६ सय ९० पालिकाको नतिजा सार्वजनिक
स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत अहिलेसम्म ६ सय ९० वटा पालिकाको नतिजा आएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार २ सय ४३ नगरपालिका र ४ सय ४७ गाउँपालिका गरी ६ सय ९० पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको हो ।
२५ वर्षपछि कांग्रेसको पुनरागमन
बुटवल । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गृहनगर बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खेलराज पाण्डेयले फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गरेका छन् ।
स्रोतमै वर्गीकरण गरेर फोहर व्यवस्थापन गरिने
काठमाडौं । वाग्मती सफाइ महाअभियानबाट उठाइने फोहर अब स्रोतमै वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सफाइ महाअभियान सुरु भएको नौ वर्ष पुगी १० वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा आज आयोजित कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव एवं प्रमुख अभियानकर्मी लीलामणि पौडेलले अबको फोहर वैज्ञानिक रूपले स्रोतमै वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्न नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी काम गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ११ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ११ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पीसीआर र एन्टिजेन गरी ३ हजार ३० जनाको नमूना परीक्षण गर्दा ११ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन भए पनि उपत्यकाका अधिकांश ठूला अस्पताल आइतबार सञ्चालनमा आउने भएका छन् । लगातार दुई दिन बिदा हुँदा बिरामीलाई उपचारमा समस्या पर्ने जनाउँदै ती अस्पताल आइतबार सञ्चालन हुन थालेका हुन् । दुई दिन बिदा हुँदा बिरामी निकै मारमा पर्ने देखिएको छ । उपत्यकाको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, सहिद गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताललगायतका ठूला अस्पतालले बिरामीको उपचारलाई मध्यनजर गर्दै आइतबार अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
नेपालमा थप ११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर गरिएको २ हजार ३ सय पिसिआर परीक्षणका क्रममा ११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
पछिल्लो २४ घन्टामा थप १२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घन्टामा देशभर १२ जना कोभिड-१९ का संक्रमित भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार आज ३ हजार ६२७ जनामा गरिएको परीक्षणमा १२ जना संक्रमित भेटिएका हुन् ।
डोल्पाका यार्सा पाटन जेठ ११ गतेदेखि खुल्दै शनिबार सदरमुकाम दुनैमा जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख शेरबहादुर बुढाको अध्यक्षतामा जिल्लाका विभिन्न निकायका प्रमुख प्रतिनिधिको सहभागितामा बसेको बैठकले शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र र विभिन्न सामुदायिक वनमा रहेका यार्सा पाटन आगामी असार १० गतेसम्म सङ्कलन गर्न पाउने निर्णय गरेको हो ।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज झण्डै नौ अङ्कले बढ्यो
हिजो मङ्गलवार ८५ अङ्कले घटेको शेयर बजार आज बुधवार भने सामान्य बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आठ दशमलव नौ अङ्कले बढेर दुई हजार दुई सय ७४ दशमलव ४२ विन्दुमा पुगेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विदेशिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी तथा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सेयर बजार नेप्सेमा एकै दिन ८४ अंकले गिरावट
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनपछिको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजार नेप्सेमा एकै दिन ८४ अंकले गिरावट आएको छ । मंगलबार अधिकांश कम्पनीहरूले नोक्सानी व्यहोरेका छन् । मंगलबार नेप्से ८३ दशमलब ६१ अंकले घटेर नेप्से परिसूचक २२ सय ६५ दशमलब ५२ अंकमा पुगेर बन्द भएको छ ।
सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार ७ सय
काठमाडौं । सुनचाँदी बजारमा मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार ७०० तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला ९६ हजार ५०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार मंगलबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार २ सय छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला ९६ हजार थियो ।
महेन्द्रनगर । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले सुख्खाबन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजार नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । साताको सुरुदेखि बढेको नेप्से अन्तिम दिन १८ दशमलव ६४ अंकले घटेर २३ सय ५० अंकमा पुगेको हो । बुधबार नेप्से ५६ अंकले बढेको थियो । बिहीबार कारोबार रकममा भने वृद्धि भएको छ।
तमुधिं नेपालले ३७ औं स्थापना दिवस मनायो तमु समुदायको पुरानो, अग्रणी सामाजिक संस्था तमुधिं नेपालले आफ्नो ३७ औं स्थापना दिवस मनाएको छ । विसं. २०४२ सालको जेठ ५ गते स्थापित तमुधिं नेपालले पोखरा ९ नयाँबजारस्थित तमुधिंमा शुभकामना आदानप्रदानसँगै तमुधिं नेपालको नवनिर्मित बैठक कक्षको उद्घाटन गर्दै स्थापना दिवस मनाएको हो ।
भोट हालेर फर्कने क्रममा मृत्यु बैतडीमा मतदान गरेर फर्कने क्रममा एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिका ३ स्थित सनातन धर्म मावि श्रीकोट मतदान केन्द्रमा भोट हालेर फर्कने क्रममा दोगडाकेदार ३ कफल्टाका ८४ बर्षीय हरिसिंह भाटको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मतदान गर्न तीन दिन पैदल ! भौगोलिकरूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा यातायात सुविधा नपुगेको सिमकोस बगरका बासिन्दालाई मतदान केन्द्रमा पुग्न र घर फर्कन तीन दिन समय लाग्ने भएको हो । स्थानीयवासी चित्रबहादुर तिलिजाले मतदान हुनुभन्दा एक दिनअघि घरबाट हिँडेर भोलिपल्ट मतदान गरेर मात्र फर्कने गरिएको बताउनुभयो ।
स्वर्ण पदक विजेता भारात्तोलन खेलाडी सन्जु मृत फेला १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)की स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलन खेलाडी सन्जु चौधरी मृत फेला परेकी छिन् ।
रोल्पामा माओवादी र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप, कांग्रेसका २ जना घाइते रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिका–५ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच गए राति झडप भएको छ । झडपमा परी कांग्रेसका दुई कार्यकर्ता घाइते भएका छन् ।
नवौं शताब्दीको पार्वतीको मूर्ति नेपाललाई फिर्ता गर्दै अमेरिका अमेरिकाको कनेक्टिकट राज्यस्थित येल युनिभर्सिटी आर्ट ग्यालरीले आफ्नो स्थायी सङ्ग्रहमा रहेको नवौं शताब्दीमा बनेको ढुङ्गाको पार्वतीको मूर्ति नेपाललाई फिर्ता गर्ने भएको छ ।
भारतको बिहारमा चट्याङ र हावाहुरीका कारण ३३ जनाको मृत्यु भारतको बिहारमा चट्याङ र हावाहुरीका कारण ३३ जनाको मृत्यु भएको छ । हिजो दिउँसो तीव्र गतिमा चलेको हावा हुरी र चट्याङमा परेर बिहारका १६ वटा जिल्लामा ३३ जनाको मृत्यु भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
भारतमा प्रदुषणबाट एक वर्षमा २३ लाखको मृत्यु भारतमा सन् २०१९ मा प्रदुषणका कारण २३ लाख मानिसको मृत्यु भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । भारतको प्रदुषण र स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोग ल्यान्सेटले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा १६ लाख व्यक्तिको वायु प्रदुषणका कारण मृत्यु भएको र ५० हजार भने जल प्रदुषणको शिकार भएको उल्लेख छ ।
न्युयोर्कको सुपरमार्केटमा गोली चल्दा १० जनाको मृत्यु अमेरिकाकाे न्युयोर्कमा भएको गोलीकाण्डमा १० जनाको मृत्यु भएको छ । बफेलो सहरमा भएको सो गोलीकाण्डपछि एक १८ वर्षीय युवकलाई पक्राउ गरिएको छ । प्रहरीले उनको नाम भने खुलाएको छैन ।
दिल्लीको व्यावसायिक भवनमा आगलागी, २७ जनाको मृत्यु पश्चिम दिल्लीको मुन्डकामा एउटा चार तले व्यावसायिक भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा २७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १२ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरुलाई सञ्जय गान्धी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपतिको निधन दुबई–संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपति शेख खलिफा बिन जायद अल नाह्यानको निधन भएको छ । उनको ७३ वर्षको उमेरमा निधन भएको त्यहाँको सरकारी समाचार संस्था वामले जनाएको छ ।
श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा रनिल विक्रमासिङ्घे नियुक्त श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा रनिल विक्रमासिङ्घे नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले विक्रमासिङ्घेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । विक्रमासिङ्घे श्रीलङ्कामा सबैभन्दा धेरै पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।
श्रीलंका संकटः कानून उल्लंघन गर्नेलाई गोली हान्ने आदेश श्रीलंकामा सरकार विरोधी प्रदर्शन रोक्न सुरक्षाकर्मीलाई कानून उल्लंघन गर्नेलाई गोली हान्ने आदेश दिइएको छ । इतिहासमै अहिलेसम्मकै खराब आर्थिक संकटलाई लिएर प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।
गत चैत २९ गतेदेखि सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा सुरु भएको प्रदर्शनी यही वैशाख २९ गतेसम्म जारी रहने छ ।
चतुर्दशीका दिन आफ्नो टोल र छरछिमेक सफाइ गरेपछि मध्यरातदेखि वैशाख शुक्ल तृतीयाअर्थात् अक्षय तृतीयाका दिनसम्म कान्तिभैरवको मुख्य जात्रा लाग्छ ।
लाइसेन्स लिन लाम बिहीबार, वैशाख १५, २०७९, ०८:२८:००
१५ तस्बिरमा यस्तो देखियो नेपालमा स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता मंगलबार, वैशाख १३, २०७९, ००:०४:००
११ तस्बिरमा हेर्नुहोस्, बाइसधारा मेला शनिबार, वैशाख ३, २०७९, १४:४२:००
निर्वाचन विशेष : किसानलाई उत्पादन हेरेर अनुदान दीनुपर्छ
महिला टी २० सिरिज नेपालको दोस्रो जित, युगान्डालाई उपाधि
काठमाडौँ। महिला टी २० अन्तर्राष्ट्रिय शृंखलाको पाँचौं तथा अन्तिम खेलमा नेपालले युगान्डालाई ३४ रनले पराजित गरेको छ। अन्तिम दुई खेलमा जित निकाले पनि सिरिज भने अघिल्लो तीन खेलमा लगातार जित निकाल्दै युगान्डाले जितिसकेको छ ।
काठमाडौं । युगान्डाविरुद्धको चौथो ट्वान्टी २० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाल १५ रनले विजयी भएको छ । शुक्रबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा वर्षाका कारण १८ ओभरमा घटाइएको खेलमा नेपालले दिएको ९८ रनको लक्ष्य पछ्याएको युगान्डाले निर्धारित ओभरमा आठ विकेट गुमाएर ८२ रनमात्र बनाउन सक्यो ।
काठमाडौं । नेपाल तेस्रो महिला टी–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजमा युगान्डासँग फेरि पराजित भएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपाल पाहुना टोली युगान्डासँग ६ विकेटले पराजित भएको हो । यस जितसँगै युगान्डाले दुई खेलअगावै सिरिज जितेको छ ।
काठमाडौँ । युगान्डाविरुद्धको तेस्रो टी–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने भएको छ ।
टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखला अन्तर्गत दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित, युगान्डा एक विकेटले विजयी
पाँच खेलको टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखला अन्तर्गत दोस्रो खेलमा युगान्डाले नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीमाथि एक विकेटको साँघुरो जित निकालेको छ । जितसँगै पाँच खेलको श्रृंखलामा युगान्डाले २-० अग्रता बनाएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली पहिलो महिला टी–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय पाहुना टोली युगान्डासँग पराजित भएको छ । सोमबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपाल युगान्डासँग १२ रनले पराजित भएको हो । पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेलेको नेपाल पहिलो खेलमा नै पराजित भएको हो ।